3 siyaabood ee la dhaafayo qufulka iCloud aad iphone
3 Siyaabaha ay garab iCloud Lock aad iPhone.
2.Bypass iCloud shaqeyn Lock Software
Safe 3.Wondershare Eraser
Haddii aad u isticmaashay ah 'Hel My iPhone' app, waxaad ka heli doontaa in ay timaado la feature ah iCloud qufulka hawshooda. Marka aad qabtid app this karti, wax user u baahan doonaa inuu soo galo id Apple iyo password in ay ama dami qalab aad ama aad ku hesho ama xataa u celin ku saabsan. Marka la soo koobo, wax kasta oo ay helaan taleefan waxay u baahan tahay Id Apple iyo password.
Haddii aad raadinayso siyaabo by kaas oo waxaad dhaaftaan karaa iCloud qufulka hawlgelinta, waxaannu wadaagi doonaa faahfaahin muhiim ah oo ku saabsan la mid ah. Mararka qaarkood, waxa dhici kartaa in ay sidaas waxaad ka heli doontaa baahida loo qabo in ay garab iCloud ku xiran si aad mar kale u isticmaali kartaa qalab aad. Waxaa jira badan oo qalab iyo software oo loo isticmaali karo in lagu furo iCloud. Waxaan ka hadli doonaa seddex ka mid ah.
Qaybta 1aad Apple Solutions
Haddii aad tagto iyada oo talaabooyinka ay bixiyaan bulshada Apple ah, waxaa ka mid ah aragtida ah in aad u baahan tahay in la sameeyo soo socda.
Waxaad ku qortaa Apple Id iyo eraygaaga sirta ah iyo helitaanka qalab aad.
Marka aad qortey, waa in aad ka dibna tag si aad u ogaato aan iPhone oo dami.
Hadda, waxaad u baahan tahay in ay tirtirto dhammaan goobaha iyo xogta.
Si tan loo sameeyo, raac navigation this.
Dhaqaaq goobaha ka dibna u jiheysan 'guud'. Under 'guud', ​​guuraan badan si 'dib' ka dibna waa in aad guji 'content masixi iyo goobaha oo dhan ".
Tani qaab doonaa telefoonka gebi ahaanba oo aad u haboon isticmaalka mar kale.
Haddii aad ilowday erayga sirta, waxaad dooran kartaa in ay dib iyadoo la booqanayo page Apple Id oo raacaya tilmaamaha.
Part 2 tallaabsato iCloud shaqeyn Lock Software
Tani waa qalab kale oo ku iman kartaa in anfacaya. Waxaa jira qalab kala duwan oo ay ballankaas inuu kaa caawiyo inaad furo qalab iCloud iyo aad u baahan tahay si ay u raacaan tilmaamaha fudud iyo fuliyaan shaqada.
• Download tallaalka iCloud qufulka hawlgelinta qalabka aad mashiinka adigoo gujinaya halkan .
Connect aad iPhone in aad PC iyadoo la kaashanayo cable USB ka dibna ku rid hab DFU ah.
Hadda, guji 'bilowga' badhanka.
Waxaad ka heli doontaa liiska modules iyo waa in aad kala dooran model saxda ah ka dibna ku dhuftay ku soo socda.
Ha software shaqeeyaan socdo. Waxay qaadan kartaa 20 ilaa 25 daqiiqo.
Marka geeddi-socodka la soo gabagabeeyo, telefoonka reboot doonaa ahaantiisa.
Hubi in mar kale u dhigay telefoonka sidii cusub.
Hubi in aad u Jeediyey 'heli my iPhone' off.
Wondershare SafeEraser waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wax ku ool ah oo lagu yaqaan bixinaya qaar ka mid ah qaababka ugu wanaagsan kaas oo noqon kara mid ah caawimaad. SafeEraser waa mid ka mid ah qalab xoogan ay bixiyaan Wondershare oo ku iman kartaa haan ee aawadiis aad qufulka hawshooda u iCloud Goldogob. Waxayna u shaqaysaa iyadoo Windows XP / Vista / 7 iyo 8 xitaa.
Waxaa la og yahay in ay aad u muhiim u ah la tirtiro xaadirka xogta dhamaystiran ee iPhone. Tallaabooyinka loo raaco waa fudud aad u oo aad u isticmaali kartaa aawadood Goldogob qufulka.
Xaaladdan oo kale, aad soo iibsatay iPhone cusub iyo waxa ay u muuqataa in la iCloud qufulan, waxaad isticmaali kartaa software this aawadood Goldogob qufulka.
• Download SafeEraser Wondershare barnaamijka oo ku xidh aad mashiinka
• Isku aad iPhone si aad nidaamka iyo barnaamijka lagu ogaan doonaa qalab aad.
• Waxaad ka heli doontaa shaashadda soo dhaweyn darani waxaa jiri doona laba doorasho, kuwaas oo
o 'masixi dhammaan xogta ku saabsan qalab'
o 'masixi tirtiray files'
• Riix "masixi dhammaan xogta ku saabsan qalab '.
• Iyada oo ay taasi ka mid ah hal click, waxaad tirtiri kartaa dhammaan xogta taas oo jooga qalab aad.
• Riix "bilowga iyo macluumaadka oo dhan jooga ah ee aad taleefan dhammaantiis la tirtiraa doonaa.
• Marka tirtirka la dhameeyo, waxaad yeelan doontaa fariin sheegaysa isku mid.
• Xogta ayaa gebi ahaanba hadda tirtiray oo aad u suurtagashay in ay si guul ah ku soo ag mara qufulka iCloud ah.
Hirgalinta talaabooyinkan masixi doono dhammaan macluumaadka ka telefoonka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal wax in la sameeyo. Si loo hubiyo in aad si buuxda u xisaabtaada tirtirayaa, waxaad u baahan tahay inaad unregister qalab aad ka xisaabtaada Apple. Raac tallaabooyinkan si la mid ah sameeyo.
Tallaabada ugu dambaysaa waxay tahay in la unlink aad iPhone ka xisaabtaada Apple.
Tag website Apple ee halkan .
Ku qor aqoonsiga si aad u helaan shubo xisaabta galo.
Hadda, guji edit in xaalkaa badeecada.
Dhinaca midig ee badeecada, sax ah oo ku saabsan badhanka 'X'.
Hadda, hubi badhanka 'unregister'.
Tani waa dhan aad u baahan tahay in ay sameeyaan aawadiis qufulka ay hawshooda ku saabsan iPhone Goldogob iyo waxay kaa caawin doontaa mar kale aad u isticmaasho telefoonka. Waxaa hubaal waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan oo aad isticmaali karto.
> Resource > iCloud > 3 Siyaabaha ay garab iCloud Lock for Your iPhone.